छ बुँदे टोक्यो घोषणापत्र सहित च्याप्टर सम्मेलन सम्पन्न – BRTNepal
बिआरटीनेपाल २०७६ माघ ५ गते १०:४२ मा प्रकाशित
एक दर्जन पुस्तक विमोचित, केन्द्र र च्याप्टरबिचको सम्बन्ध बन्यो दरिलो
टोक्यो, जापान । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) को तेस्रो च्याप्टर सम्मेलनले संसारभरि छरिएका साहित्यकारहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । संस्था स्थापना भएको दुई दशक बित्न लाग्दा सबैलाई समेट्दै नेपाली साहित्यलाई विभिन्न भाषामा अनुवाद गर्ने कार्यलाई पनि द्रुतगतिले अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनले पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन सिटौलाको नेतृत्वमा छ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आन्तरिक कमजोरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
टोकियोको सिन्जुकुमा सम्पन्न भएको अनेसास च्याप्टर सम्मेलनमा केन्द्र र च्याप्टरबिचको सम्बन्धमा रहेका कमजोरीहरूलाई पनि निकास दिइएको छ । सम्मेलनमा नौ देशका १७ च्याप्टरका प्रतिनिधि र नेपालका चर्चित साहित्यकारहरूको उपस्थिति थियो ।
केन्द्रीय कार्य समितिको आयोजना र जापान च्याप्टरको संयोजन र व्यवस्थापनमा भएको उक्त सम्मेलनको संयोजक जापान च्याप्टरका पूर्व अध्यक्ष दीप पाठक थिए । पाठकको नेतृत्वमा रहेको जापान च्याप्टर (२०१७-२०१९) लाई संसारभरिका च्याप्टरहरूमध्ये उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेबापत विशिष्ट च्याप्टर पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । जापान च्याप्टरले प्राप्त गरेको उक्त पुरस्कार प्रमुख अतिथि तथा जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणाले प्रदान गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं व्यवसायी भवन भट्टले सम्बोधन गर्दै प्रवासमा बढ्दै गएको साहित्य चेतलाई अनेसासले सङ्गठित गरेकोमा हर्ष प्रकट गर्नुभयो । कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ आइसिसीका कोषाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले जापानमा रहेका नेपालीहरूको साहित्यप्रतिको लगावले आफू प्रभावित भएको बताउनु भयो ।
प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै महामहिम राजदूत प्रतिभा राणाले विदेशी भूमिमा नेपाली भाषा र साहित्यको उन्नयन र विकासमा अनेसासले गरेको योगदानको खुलेर प्रशंसा गर्दै यस कार्यमा दूतावास परिवार सहकार्य गर्न तयार रहेको कुरा बताउनु भयो ।
यसै गरी संस्थापक अध्यक्ष होमनाथ सुवेदी र बोर्ड अफ ट्रस्टी अध्यक्ष गीता खत्रीले पठाउनुभएको शुभकामना मन्तव्य महासचिव गणेश घिमिरेले वाचन गर्नुभएको थियो । दीप पाठकको स्वागत मन्तव्य रहेको सो उद्घाटन सत्रमा अनेसास जापानका पूर्व अध्यक्षहरू डा. कुमार बस्नेत, बेलुकाजी थापा र विष्णुप्रसाद घिमिरे, दिनेशराज ज्ञवाली, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापान अध्यक्ष देवीलाल भण्डारी, आइसिसी एसिया युवा संयोजक दीपक कँडेलले पनि बोल्नुभएको थियो ।
यस अघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश पौडेल ‘माइला’ ले जापानमा आयोजित च्याप्टर सम्मेलनको उद्देश्य र विषयमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
दुई दिन चलेको उक्त कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप प्राध्यापक तथा साहित्यकार महेश पौड्यालको कार्यपत्र र ५० भन्दा बढी कविहरूको कविता वाचन थियो । पौड्यालले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रलाई नेपाली भाषामा स्नातकोत्तर गरेका जापानी नागरिक हारुहितो नोजु र पत्रकार भूषण घिमिरेले टिप्पणी गर्नुभएको थियो । कार्यपत्र सेसनको सञ्चालन केन्द्रीय उपाध्यक्ष निशा अर्यालले गर्नुभएको थियो ।
त्यसै गरी महेश पौड्याल, राधेश्याम लेकाली, प्रमोद सारङ्ग, रत्न सुब्बा, लालगोपाल सुवेदी, ईश्वरी भट्ट, लवकुमार बुढाथोकी लगायतका लेखकहरूका पुस्तक विमोचन गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा निवर्तमान अध्यक्ष तथा बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्मा, पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष डा. कुमार बस्नेत र मोहन सिटौला तथा वर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष राधेश्याम लेकाली सहितको कार्यसमिति र च्याप्टर अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि र आजीवन सदस्यहरूको उपस्थितिमा केन्द्र, ट्रस्टी र च्याप्टरबिचमा दरिलो समन्वय कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । १७ च्याप्टरका बिचमा भएको उक्त छलफलले विधान र आन्तरिक विषयमा दफावार छलफल गरेको थियो । सहभागीहरूबाट आएका सुझाव र गुनासोहरूलाई केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीमसेन सापकोटा, केन्द्रीय सचिव लालगोपाल सुवेदी र आजीवन सदस्य रमेश दाहालले संश्लेषण गर्नुभएको थियो । छलफल कार्यक्रमको सभापतित्व केन्द्रीय कार्य समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश पौडेल ‘माइला‘ले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा उत्कृष्ट कार्य गरेबापत दोस्रो हुने कोरिया च्याप्टर तथा तेस्रो हुने कतार च्याप्टरलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । उत्कृष्ट च्याप्टर पुरस्कारको प्रायोजन पदम विश्वकर्मा र द्वितीय र तृतीय च्याप्टर पुरस्कारको प्रायोजन निशा अर्यालले गर्नुभएको हो । त्यसै गरी यसअघि क्रमशः पहिलो र दोस्रो च्याप्टर सम्मेलनको संयोजन गरेर उत्कृष्ट कार्य गर्ने शान्तिराम ढकाल र कृष्ण गिरीलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रमको मूल उद्घाटन सत्रको सञ्चालन केन्द्रीय कार्य समितिका महासचिव गणेश घिमिरे र जापान च्याप्टर महासचिव रविन शर्माले गर्नुभएको थियो । पहिलो दिनको दोस्रो सेसनमा ५० कविहरूले कविता वाचन गरेका थिए । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण बम मल्ल, प्रतिष्ठानका जापान शाखा अध्यक्ष सूर्य खड्का र समुद्रराज पौडेलले साङ्गीतिक माहौल सिर्जना गर्नुभएको थियो । काव्य गोष्ठीको सञ्चालन केन्द्रीय सचिव लालगोपाल सुवेदी र जापान च्याप्टर उपाध्यक्ष हेमन्त गिरीले गर्नुभएको थियो । जापान स्थित नेपाली दूतावासले कार्यक्रममा सहभागी साहित्यकारहरूलाई स्वागत गर्दै रात्रीभोजको आयोजना गरेको थियो ।
कार्यक्रममा केन्द्रीय समिति तर्फबाट दिइने विभिन्न पुरस्कार प्रायोजन गर्ने भवन भट्ट, पदम विश्वकर्मा एवं दुर्गा दाहाललाई पनि सम्मान गरिएको थियो । अनेसास कोरिया च्याप्टरको गतिविधि र प्रकाशनको काममा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएबापत वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश पौडेल ‘माइला’ लाई कोरिया च्याप्टरले अभिनन्दन समेत गरेको थियो ।
अन्तिम सत्रमा च्याप्टर अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो च्याप्टरको २ वर्षे कार्य प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । यो सत्रको सञ्चालन केन्द्रीय उपाध्यक्ष शान्तिराम ढकालले गर्नुभएको थियो । सम्मेलनमा अमेरिका, जापान, कोरिया, नेपाल, भारत, कतार, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकको सहभागिता थियो ।
अन्त्यमा जापान च्याप्टरका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गिरिजा गैह्रेले उपस्थित सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो । केन्द्रीय अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीको समापन मन्तव्यसँगै तीन दिने च्याप्टर सम्मेलनको औपचारिक समापन भएको थियो ।
उक्त कार्यक्रमले केन्द्र र च्याप्टरबिचको सम्बन्ध मजबुत बनाएको र सबैजसो आन्तरिक समस्याको समाधान भएको भन्दै सहभागीहरूले खुसी व्यक्त गरेका थिए ।